Leap Year (2010) – Burmese Subtitle
IMDB: 6.5/10 87,461 votes
ဒီကားလေးက အဓိကသရုပျဆောငျသုံးယောကျကအဓိက အယျ့ထဲမှာမှ သရုပျဆောငျ ၂ယောကျနဲ့တငျ ဇာတျလမျးရယျ့ ၃ ပုံ ၂ပုံလောကျကိုတညျထားတာ ဒါမယျ့လဲဇာတျကားလေးကိုပေါ့မတှကျနဲ့ဗြ အယျ့သရုပျဆောငျ ၂ယောကျရယျ့ Skill နဲ့ ရုပျရှငျကိုဆှဲဆောငျသှားခကျြကွီးက Drama ကားတှဘေဲ ကွညျ့ပါတော့မယျဖွဈသှားရလောကျအောငျကို ကောငျးတာ
ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ဒီကားလေးကို ပွနျကွညျ့တာ ရကွိမျထကျမနညျးတော့ဘူး ဇာတျလမျးကနညျးနညျးတောငျပွောပွလို့မဖွဈတာကိုတော့ စိတျမရှိပါနဲ့နျော ဘာလို့ဆို BS ကရုပျရှငျ ဝါသနာအိုးဂရုကွီးတှကေို ပါးပါးလေးပုပျလိုကျရငျ ဇာတျကားသဘောကိုသိသှားနိုငျတယျ ရုပျရှငျကွညျ့ရတာ ပေါ့ပကျြပကျြကွီးဖွဈသှားမှာလဲ ကွောကျတယျ ဒီကားလေးကို ကွညျ့ပွီးမှ ပွုံးသှားမှာကိုလဲ လိုလားတယျ့ မိမိဆန်ဒအလြောကျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကို မပွောပွလိုတော့ပါ ….
ကွညျ့ပွီးကောငျးတယျဆိုရငျလဲ ရငျထဲမှာပီတိလေးတှနေဲ့ပွူံးပြျောနိုငျကွစလေို့ပွောရငျးး နိဂုံးခြုပျခြုပျခြုပျ….အဲနအေုနျးမတေ့ော့မလို့ မငျးသမီးက SUPERMAN ရယျ့ မတျမတျ Amy Adam နျော
ဒီကားလေးက အဓိကသရုပ်ဆောင်သုံးယောက်ကအဓိက အယ့်ထဲမှာမှ သရုပ်ဆောင် ၂ယောက်နဲ့တင် ဇာတ်လမ်းရယ့် ၃ ပုံ ၂ပုံလောက်ကိုတည်ထားတာ ဒါမယ့်လဲဇာတ်ကားလေးကိုပေါ့မတွက်နဲ့ဗျ အယ့်သရုပ်ဆောင် ၂ယောက်ရယ့် Skill နဲ့ ရုပ်ရှင်ကိုဆွဲဆောင်သွားချက်ကြီးက Drama ကားတွေဘဲ ကြည့်ပါတော့မယ်ဖြစ်သွားရလောက်အောင်ကို ကောင်းတာ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဒီကားလေးကို ပြန်ကြည့်တာ ၇ကြိမ်ထက်မနည်းတော့ဘူး ဇာတ်လမ်းကနည်းနည်းတောင်ပြောပြလို့မဖြစ်တာကိုတော့ စိတ်မရှိပါနဲ့နော် ဘာလို့ဆို BS ကရုပ်ရှင် ဝါသနာအိုးဂရုကြီးတွေကို ပါးပါးလေးပုပ်လိုက်ရင် ဇာတ်ကားသဘောကိုသိသွားနိုင်တယ် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ ပေါ့ပျက်ပျက်ကြီးဖြစ်သွားမှာလဲ ကြောက်တယ် ဒီကားလေးကို ကြည့်ပြီးမှ ပြုံးသွားမှာကိုလဲ လိုလားတယ့် မိမိဆန္ဒအလျောက် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို မပြောပြလိုတော့ပါ ….
ကြည့်ပြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်လဲ ရင်ထဲမှာပီတိလေးတွေနဲ့ပြူံးပျော်နိုင်ကြစေလို့ပြောရင်းး နိဂုံးချုပ်ချုပ်ချုပ်….အဲနေအုန်းမေ့တော့မလို့ မင်းသမီးက SUPERMAN ရယ့် မတ်မတ် Amy Adam နော်
Option2mega.nz 1.56 GB 1080p
Option3onedrive.live.com 1.56 GB 1080p
Option4mediafire.com 1.56 GB 1080p
Baby’s Day Out (1994) 1994
Step Mom (1998) 1998